Ikhadi le-China 3 Dots Cobalt Dichloride Free Humidity Card Indicator and Factory | Isifunda
1. Umswakama kusho ukuthi umbala wephoyinti elibambekile uzokuzwa umswakama ohlobene nemvelo endaweni ethile evalekile, bese ushintsha usuka kumbala owomile uye kumbala ofanayo omanzi.
2. Inani lomswakama elihambelana nephoyinti ngalinye liphrintiwe eduze kwephoyinti lokukhombisa.
3. Umswakama kusho ukuthi umswakama ohlobene nekhadi uyashintsha ngesikhathi senqubo yokuchayeka, nombala uzoshintsha.
4. Lapho inani elithile lomoya lomile, umswakama ukhombisa ukuthi umbala wephoyinti elibhajwe uyashintsha ukusuka ekubeni manzi uye komile. Faka ikhadi lenkomba yomswakama esitsheni esivaliwe nenani elifanele le-desiccant, bese uliguqula lisuke selimanzi loma.
5. Umswakama kusho ukuthi ukunamathela komile ngaphambi kokusetshenziswa.
6. Umswakama ukhombisa ukuthi umswakama okhonjiswe ku-23 degrees Celsius yiwona onembe kakhulu.
7. Ungathinti izinkomba, futhi ungagezi noma iyiphi indawo yokubonisa ngamanzi.
1．Umkhiqizo uvaliwe futhi uyagcinwa futhi akumele uvezwe emoyeni isikhathi eside. kumele ibeke endaweni eyomile nenomthunzi.
2．Gwema ilanga eliqondile. Hlala kude nezindawo ezinomswakama ophezulu njengokukhanya kwelanga namanzi
Ikhadi lomswakama alikwazi ukuvula isitsha sekhadi lesikhombisi somswakama isikhathi eside. isikhathi ngasinye ivulelwe ukuvala ngokushesha, okukhombisa ukuthi ikhadi lilungele ukusetshenziswa. lapho kuvulwa ikhadi lomswakama, iphuzu lenkomba yomswakama kufanele libe umbala owomile, uma umbala ukhonjisiwe futhi womile nombala nawo awuhambisani, okufakazela ukuthi isitsha sokupakisha asivaliwe, kumele some ichashazi ukubuyisela umbala owomile esetshenzisiwe.
Langaphambilini 6 Amachashazi Cobalt Mahhala neHalogen Free Humidity Card Indicator Card
Olandelayo: Amakhadi we-6 Dots Cobalt Dichloride Free Humidity Card
Ikhadi Lokukhomba Umswakama, Ikhadi Lesikhombi Somswakama Mahhala, Ukuhlola Umswakama Card, Ikhadi Lezikhombisi Lomswakamo Lamachashaza Ayisithupha, Ikhadi lamahhala leCobalt, ICobalt Mahhala,